အရေပြားယားယံမှု (Allergic) တွေဟာ ဒီလိုအရာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ် – Trend.com.mm
ခန္ဓာကိုယ်ယားယံမှု Allergic တွေဟာအစားမှားတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို အစားလည်းမမှားပဲ ယားယံတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။တစ်ချို့ကအစားမှားရင်သာ allergic ဖြစ်တတ်တယ်ထင်ထားကြတာပါ။တကယ်တော့ ကိုယ်နေ့စဉ်ထိတွေ့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်း Allergic ဖြစ်နိုင်တာမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကြောင့်ယားယံမှုအဖုအပိန့်တွေဖြစ်တတ်လဲ?
တန်ဖိုးသင့်တဲ့ငွေရောင်လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းတွေဟာ များသောအားဖြင့်နီကယ်နဲ့လုပ်ထားကြတာများပါတယ်။အမျိုးသမီး ၁၇ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အမျိုးသား ၃ရာခိုင်နှုန်းဟာ နီကယ်နဲ့ဓာတ်မတည့်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့် လက်စွပ်၊ဆွဲကြိုးဝတ်ဆင်ထားတဲ့အခါယားယံမှုတွေဖြစ်လာတတ်တာပါ။
တစ်ချို့လူတွေကတော့ သတ္တုပစ္စည်းတွေနဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့ allergic ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဖုန်းသုံးနေရင်း မျက်နှာလေးယားလို့၊လက်လေးယားလို့ကုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဓာတ်မတည့်တဲ့အတွက် အရေပြားယားယံမှုတွေပိုပြီးဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဖုန်းသုံးနေရင်း မျက်လုံးကိုပွတ်တာမျိုးက မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေကသတိပေးအကြံပြုထားပါတယ်။
ဘောင်းဘီမှာပါတဲ့ကြယ်သီးတွေဟာလည်းနီကယ်နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ဒီသတ္တုဓာတ်ဟာ လက်ကိုတိုက်ရိုက်ထိမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ တစ်ခြားအရေပြားတွေကိုထိတွေ့မိတဲ့အခါ နီမြန်းယားယံမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ချို့တွေ ကြယ်သီးနေရာက ယားယံသလိုဖြစ်နေကြတာပါ။ဒီလို သတ္တုပါတဲ့ပစ္စည်းတွေထိတွေ့မယ်ဆိုရင် ကြားခံတစ်ခုခုရှိတာပိုကောင်းပါတယ်။အသားနဲ့မထိအောင်ရှပ်အကျီအထဲထည့်ဝတ်တာမျိုးပေါ့။
သိုးမွှေးစတွေက ယားယံတတ်တာအားလုံးသိပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့ ဒီသိုးမွှေးစတွေကြောင့် Allergic ဖြစ်ကြတာရှားပါတယ်။တစ်ချို့ lanolin နဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့သူတွေဟာတော့ သိုးမွှေးစောင်၊သိုးမွှေးအကျီတွေနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့အခါယားယံမှုတွေ၊အဖုအပိန့်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။Lanolin ဟာ
တစ်ချို့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ခေါင်းလျှော်ရည်တွေ၊နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတွေမှာလည်းသုံးကြလို့ သေချာသတိထားဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
တစ်ချို့သူတွေကတော့ ပန်းသီး၊ငှက်ပျောသီး၊ဖရဲသီး၊ခရမ်းချဉ်သီး၊မုန်လာဥ၊ကြက်သွန်နီ၊အာလူး၊မြေပဲအစေ့အဆန်စတဲ့ သဘာဝထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တတ်ပါဘူး။အစားအစာထဲမှာဓာတုဆေးဝါးပါတာကြောင့် ယားယံမှုဖြစ်တာထက် တစ်ချုိ့က ဒီလိုအသီးအနှံတွေသေချာမဆေးကြောပဲ
မဖတ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့စာအုပ်ဟောင်းတွေမှာ ဘတ်တီးရီးယားတွေရှိနေတဲ့အမှုန်အမွှားတွေအများကြီးကပ်ငြိနေတတ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေရှုရှိုက်မိတဲ့အခါ၊ထိတွေ့မိတဲ့အခါ၊အမှုန်တွေထိထား တဲ့လက်နဲ့ အရေပြားကိုကိုင်တွယ်မိတဲ့အခါ ယားယံမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မဖတ်တာ၊မကိုင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့စာအုပ်ပုံကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်လက်အိတ်တို့၊mask တို့တပ်ဆင်ပြီးရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်။
လူအများစုကတော့ သားရေနဲ့ဓာတ်တည့်ကြပါတယ်။လူတစ်ချို့ကတော့ သားရေနဲ့ဓာတ်မတည့်ပဲ သားရေဖိနပ်၊သားရေအိတ်အသုံးပြုတဲ့အခါ ယားယံမှုတွေ၊အရေပြားနီမြန်းမှုတွေဖြစ်လာတတ်ကြတာပါ။ကိုယ်ကအမြဲလိုလိုသားရေနဲ့ထိတွေ့လိုက်တိုင်းနီမြန်းယားယံမှုတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်
နေရောင်ခြည်နဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့လူဆိုတာ ရှားရှားပါးပါးပါပဲ။နေရောင်ခြည်နဲ့ဓာတ်မတည့်မှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုရင် နေပူထဲခဏလေးသွားလိုက်ရုံနဲ့ အရေပြားနီမြန်းလာမယ်။ရောင်ရမ်းလာမယ်။ယားလာမယ်။အဖုအပိန့်လေးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ဒါက နေနဲ့ဓာတ်မတည့်တာပါပဲ။တစ်ချို့ကတော့မြန်မြန်ပျောက်သွားလေ့ရှိပေမဲ့ တစ်ချို့ကတော့ သတိမထားရင်မထားသလိုဆေးကုသမှုခံယူပြီးမှပျောက်ကင်းသွားတတ်ပါတယ်။နေပူထဲသွားတဲ့အခါ အမိုးအကာတစ်ခုခုယူသွားဖို့သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်လည်း ယားယံမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအနေနဲ့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခန်ဓာကိုယျယားယံမှု Allergic တှဟောအစားမှားတာကွောငျ့ဖွဈနိုငျသလို အစားလညျးမမှားပဲ ယားယံတာမြိုးတှလေညျးဖွဈတတျကွပါတယျ။တဈခြို့ကအစားမှားရငျသာ allergic ဖွဈတတျတယျထငျထားကွတာပါ။တကယျတော့ ကိုယျနစေ့ဉျထိတှနေ့တေဲ့ပစ်စညျးတှကွေောငျ့လညျး Allergic ဖွဈနိုငျတာမထေ့ားလို့မရပါဘူး။ဘယျလိုပစ်စညျးတှကွေောငျ့ယားယံမှုအဖုအပိနျ့တှဖွေဈတတျလဲ?
တနျဖိုးသငျ့တဲ့ငှရေောငျလကျဝတျရတနာပစ်စညျးတှဟော မြားသောအားဖွငျ့နီကယျနဲ့လုပျထားကွတာမြားပါတယျ။အမြိုးသမီး ၁ရရာခိုငျနှုနျးနဲ့ အမြိုးသား ၃ရာခိုငျနှုနျးဟာ နီကယျနဲ့ဓာတျမတညျ့ကွပါဘူး။ဒါကွောငျ့ လကျစှပျ၊ဆှဲကွိုးဝတျဆငျထားတဲ့အခါယားယံမှုတှဖွေဈလာတတျတာပါ။
တဈခြို့လူတှကေတော့ သတ်တုပစ်စညျးတှနေဲ့ဓာတျမတညျ့တဲ့ allergic ရှိတတျကွပါတယျ။ဖုနျးသုံးနရေငျး မကျြနှာလေးယားလို့၊လကျလေးယားလို့ကုတျလိုကျတယျ။အဲ့ဒီအခါဓာတျမတညျ့တဲ့အတှကျ အရပွေားယားယံမှုတှပေိုပွီးဖွဈလာတတျကွပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ဖုနျးသုံးနရေငျး မကျြလုံးကိုပှတျတာမြိုးက မလုပျသငျ့ပါဘူးလို့သကျဆိုငျရာဆရာဝနျတှကေသတိပေးအကွံပွုထားပါတယျ။
ဘောငျးဘီမှာပါတဲ့ကွယျသီးတှဟောလညျးနီကယျနဲ့လုပျထားတာဖွဈလို့ ဒီသတ်တုဓာတျဟာ လကျကိုတိုကျရိုကျထိမယျ။ပွီးရငျအဲ့ဒီလကျနဲ့ တဈခွားအရပွေားတှကေိုထိတှမေိ့တဲ့အခါ နီမွနျးယားယံမှုတှဖွေဈလာတတျပါတယျ။အဲ့ဒါကွောငျ့တဈခြို့တှေ ကွယျသီးနရောက ယားယံသလိုဖွဈနကွေတာပါ။ဒီလို သတ်တုပါတဲ့ပစ်စညျးတှထေိတှမေ့ယျဆိုရငျ ကွားခံတဈခုခုရှိတာပိုကောငျးပါတယျ။အသားနဲ့မထိအောငျရှပျအကြီအထဲထညျ့ဝတျတာမြိုးပေါ့။
သိုးမှေးစတှကေ ယားယံတတျတာအားလုံးသိပွီးသားပါ။ဒါပမေဲ့ ဒီသိုးမှေးစတှကွေောငျ့ Allergic ဖွဈကွတာရှားပါတယျ။တဈခြို့ lanolin နဲ့ဓာတျမတညျ့တဲ့သူတှဟောတော့ သိုးမှေးစောငျ၊သိုးမှေးအကြီတှနေဲ့ထိတှမေိ့တဲ့အခါယားယံမှုတှေ၊အဖုအပိနျ့တှဖွေဈလာတတျပါတယျ။Lanolin ဟာ
တဈခြို့ အလှကုနျပစ်စညျးတှေ၊ခေါငျးလြှျောရညျတှေ၊နှုတျခမျးဆိုးဆေးတှမှောလညျးသုံးကွလို့ သခြောသတိထားဝယျယူသငျ့ပါတယျ။
တဈခြို့သူတှကေတော့ ပနျးသီး၊ငှကျပြောသီး၊ဖရဲသီး၊ခရမျးခဉျြသီး၊မုနျလာဥ၊ကွကျသှနျနီ၊အာလူး၊မွပေဲအစအေ့ဆနျစတဲ့ သဘာဝထှကျပစ်စညျးတှနေဲ့ ဓာတျမတညျ့တတျပါဘူး။အစားအစာထဲမှာဓာတုဆေးဝါးပါတာကွောငျ့ ယားယံမှုဖွဈတာထကျ တဈခြို့က ဒီလိုအသီးအနှံတှသေခြောမဆေးကွောပဲ
မဖတျတာကွာပွီဖွဈတဲ့စာအုပျဟောငျးတှမှော ဘတျတီးရီးယားတှရှေိနတေဲ့အမှုနျအမှားတှအေမြားကွီးကပျငွိနတေတျပါတယျ။ဒီအရာတှရှေုရှိုကျမိတဲ့အခါ၊ထိတှမေိ့တဲ့အခါ၊အမှုနျတှထေိထား တဲ့လကျနဲ့ အရပွေားကိုကိုငျတှယျမိတဲ့အခါ ယားယံမှုတှဖွေဈတတျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ မဖတျတာ၊မကိုငျတာကွာပွီဖွဈတဲ့စာအုပျပုံကိုရှငျးမယျဆိုရငျလကျအိတျတို့၊mask တို့တပျဆငျပွီးရှငျးလငျးသငျ့ပါတယျ။
လူအမြားစုကတော့ သားရနေဲ့ဓာတျတညျ့ကွပါတယျ။လူတဈခြို့ကတော့ သားရနေဲ့ဓာတျမတညျ့ပဲ သားရဖေိနပျ၊သားရအေိတျအသုံးပွုတဲ့အခါ ယားယံမှုတှေ၊အရပွေားနီမွနျးမှုတှဖွေဈလာတတျကွတာပါ။ကိုယျကအမွဲလိုလိုသားရနေဲ့ထိတှလေို့ကျတိုငျးနီမွနျးယားယံမှုတှဖွေဈနမေယျဆိုရငျ
နရေောငျခွညျနဲ့ဓာတျမတညျ့တဲ့လူဆိုတာ ရှားရှားပါးပါးပါပဲ။နရေောငျခွညျနဲ့ဓာတျမတညျ့မှနျး ဘယျလိုသိနိုငျလဲဆိုရငျ နပေူထဲခဏလေးသှားလိုကျရုံနဲ့ အရပွေားနီမွနျးလာမယျ။ရောငျရမျးလာမယျ။ယားလာမယျ။အဖုအပိနျ့လေးတှဖွေဈလာမယျဆိုရငျ ဒါက နနေဲ့ဓာတျမတညျ့တာပါပဲ။တဈခြို့ကတော့မွနျမွနျပြောကျသှားလရှေိ့ပမေဲ့ တဈခြို့ကတော့ သတိမထားရငျမထားသလိုဆေးကုသမှုခံယူပွီးမှပြောကျကငျးသှားတတျပါတယျ။နပေူထဲသှားတဲ့အခါ အမိုးအကာတဈခုခုယူသှားဖို့သတိပွုသငျ့ပါတယျ။
ဒီပစ်စညျးတှကွေောငျ့လညျး ယားယံမှုတှဖွေဈတတျတယျဆိုတာ ကနျြးမာရေးဗဟုသုတအနနေဲ့ပွနျပွီးမြှဝပေေးလိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ။